Waaheen Media Group » Wasiir Geel-jire oo kursigii laga qaaday ku kalena an la fadhiisiin
Browse:Home Radio Waaheen Wasiir Geel-jire oo kursigii laga qaaday ku kalena an la fadhiisiin	Wasiir Geel-jire oo kursigii laga qaaday ku kalena an la fadhiisiin
on June 24, 2013 |
0 Comment	Hargeysa(Waaheen) Wasiirkii hore ee wasaaradda Kalluumaysiga Somaliland C/laahi Cismaan Geel-jire ayuu Madaxweyne Siilaanyo ku daray Liiska wasiiradda Xilka laga qaaday, oo waxa uu wasaaradiisii u magacaabay wasiir kale.
Hase yeeshee hadana Madaxweyne Siilaanyo waxa ka muuqata isla Digreetada uu xilka kaga qaaday isagoo Geel-jire ku daray kuwa la bedelay, ha yeeshee meelna hadana looma magacaabin.
Miyay Iu soo socotaa oo Liis danbuu ku jiraa mise sidaasuu kugu daayay Wasiir Geel-jire Bal adba Madaxweyne meelna ma fadhiyo Ninkaasi.
Dhinaca kale, laba Wasiir oo waaweyn oo rug cadaa dhinaca Siyaasadda ku ah ayaa xilalkii wasiirnimo laga qaaday waxaana laga dhigay La taliyayaal waa kuwama? Xaabsade iyo Gacamay, wasiiradii Hawlaha Guud iyo Deegaanka.
Isku shaandhayn tii ugu weynayd ee dhacda intii uu Madaxweyne Siilanyo xilka hayay, wali way socotaa…
Filed in: Radio Waaheen About Waaheen Media